Saqafka waxaa lagu sameeyay 29,000 oo nalalka LED-ka ah. Waa yaabe!
Xagaaga xagaaga ee Chicago iyo qaboobaha qabow ayaa xadidaya isticmaalka balbalada macmiilka. Si loo xalliyo dhibaatadan, naqshadayaashu waxay ujeeddadeedu ahayd inay abuuraan qol qorrax leh oo iftiin ka buuxo oo qurux badan leh, iyo inay u jilciyaan afarta Meelood oo leh khadad qulqulaya.
Fursadaha Ganacsi ee Iftiiminta LED Afar Dhisme
Noocyada dhismuhu badanaa aad ayey u badan yihiin, laakiin asal ahaan waxaa iska leh dhismooyinka xafiisyada dawladda, dhismayaasha xafiisyada ganacsiga, dhismayaasha guryaha la deggan yahay iyo afar nooc oo ganacsi oo ku yaal dabaqa dukaanka.
Kuleylka kuleylka ee Awoodda Sare ee Nylon-ka Koowaad
Nidaamyada qaboojiyaha laambaddu waxay u isticmaalayaan aluminium maaddo ahaan. Sababtoo ah kuleylka kuleylka hoose ee balaastikyada ayaan buuxin shuruudaha qaboojinta, looma isticmaali karo berrinka kuleylka LED-ka. Dhawaan, shirkadda DSM waxay soo saartay nooc cusub oo balaastig ah oo hufan, iyado......
Warshadaha Laydhka LED-ka Oo Ay Sababtay Suuqa Sare "Burburin"
Khubaro badan oo ku xeel dheer wax soosaarka 'LED' suuqa '' daadad '', horumarka caalamiga ah ee teknolojiyada LED-ka, casriyaynta nalalka, waxqabadka wax soosaarka ayaa si dhakhso leh u hagaagay, hoos u dhigay qiimaha wax soosaarka, wuxuu si aad iyo aad uga dhaqso badan u iftiimiyay aagagga nalalka......